पछिल्लो5वर्ष को लागि "होन्डा Ridgeline" (पिकअप जापान बनेको) सफलतापूर्वक विश्व बजार विजयी भएको छ। यो सायद जो नै सबै नवीन डिजाइन समाधान संयुक्त पहिलो एशियाली एसयूवी छ। आश्चर्य "होन्डा" (पिकअप) धेरै कुराहरू हुन सक्छ: यो स्वतन्त्र वसन्त निलम्बन र2दिशामा खोल्न सकिन्छ कि पछाडिको ढोका र चेसिस "Unibody" छ। यो अनौठो सेट बावजुद कार शो मा एक सफल debut गरे र अझै पनि उपभोक्ताहरु बीच माग हराएको छैन। यस लेखमा हामी पत्ता लगाउन दोस्रो पुस्ता "होन्डा Ridgeline" को सफलता को रहस्य के हो प्रयास गर्नेछ (पिक-अप)।
फोटो र डिजाइन को समीक्षा
तपाईं एक नवीनता हेर्न भने, तपाईंले तुरुन्तै निकाय अनुपात मा inharmonious रेखाहरू र देशहरू देख्न सक्छौं। ढोका भित्र दुई concave लाइनहरु - अगाडि हेडलाइट्स अनौठो आकार, कोणीय बम्पर र पक्ष सजाउनु। तर, कार मालिक आफूलाई तपाईं एक पिकअप ट्रक को पाङ्ग्रा पछि बस्न जब यी कमीकमजोरी, तुरुन्तै भूल छन् भन्छन्।
त्यसैले, हामी भित्र सार्न। ड्राइभिङ्ग स्थिति एकदम राम्रो कार्यान्वयन गरिन्छ, साधन प्यानल सरल र सीधा छ। बाहिर विभिन्न सेन्सर बाट अध्ययनहरू पाउन पनि निर्देश पुस्तिका प्रकट गर्न आवश्यक छैन। केहि सेकेन्ड कुर्सी तत्काल गरम लागि - पनि गरम सीट उपस्थिति प्रसन्न। चालक उत्तरी अक्षांश यसलाई कदर हुनेछ। तर सबै छ। यसलाई विशेष प्रशंसा नेभिगेसन प्रणाली, यसको सरल सञ्चालन द्वारा विशेषता छ जो योग्य हुनुहुन्छ। खैर, मार्ग निर्दिष्ट गर्न, आवश्यक कार roadside मा रोक्न - सबै जाँदा गर्न सकिन्छ। यो सुविधा पनि "होंडा Crv» घमण्ड गर्न सक्दैन।
आनंद से को सानो घर मा ठाउँ खाली को उपलब्धता गरेर हैरानी। तपाईंले केही कार्गो मात्रा ओसारपसार गर्न आवश्यक र बुट पहिले नै कब्जा गरिएको छ भने, तपाईं समतल क्षेत्र अन्तर्गत दोस्रो पङ्क्ति सिट तह द्वारा आन्तरिक ठाउँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हो, सानो घर को सुविधा र कार्यक्षमता सूची साँच्चै कार को "मानक" बाहिरी बारेमा भूल छ।
द्वारा चासो "होन्डा" उत्पादित छनोट-अप रूसी बजार को लागि 3.5 लिटर को पेट्रोल छ-सिलिन्डर इन्जिनको संग आपूर्ति गरिएको छ। रूपमा 247 अश्वशक्ति धेरै आफ्नो अधीनमा रहेका। एक उचाइ मा पनि मिसिन को टोक - 332 N / m। "होन्डा Ridgeline" ठीकै सबैभन्दा इन्धन-कुशल ले ले जाना को एक सकिन्छ। संयुक्त चक्र मा कार "सयौं" गर्न इन्धन को 12.9 लिटर खपत।
को "होन्डा" (पिकअप) कति छ?
एसयूवी को एक नयाँ दायरा को मूल्य 1 मिल। 730 हजार देखि दायरा। 1 मिल। 820 हजार (उपकरण र उपकरण स्तर मा निर्भर गर्दछ)। किनभने यसको manageability र दक्षता को, यस्तो कार लागि राम्रो मूल्य।
सामान्य मा, सिर्जना चासो "होन्डा" छनोट - crossovers र एसयूवी को सफल संयोजन। यसको चलिरहेको गुणहरू अनुसार उहाँले सान्त्वना यसको स्तर मात्र प्रिमियम कार संग तुलना गर्न सकिन्छ, जबकि, कुनै प्रतियोगिहरु छ गर्दैन। यात्री को लागि, "Ridgeline" को मोडेल - एक आदर्श विकल्प। यो आवश्यक छ कि सबै राख्न सम्भव छ, र यात्री अझै पनि ठाउँ खाली धेरै हुनेछ।
बजेट क्रसओभर छनौट
टी-55: प्राविधिक विनिर्देशों, फोटो र को इतिहास
मुख्य कलात्मक प्रविधिहरू। कवितामा कलात्मक चालहरू
Surkov Aleksey Aleksandrovich: जीवनी, युद्ध बारे कविता
Meatless स्यान्डविच, असामान्य र खाजा
वोदका संग खरबुजा। केही सरल व्यञ्जनहरु
IP65 सुरक्षा डिग्री। कुनै पनि कोठा लागि एलईडी दीपक
लेखक एलेक्स NOVAK: जीवनी, रचनात्मकता। "पुस्तक, छैन जो"
तालिका क्यालोरी फल र हाम्रो अक्षांश मा आफ्नो परिपक्वता को अवधि
XX सताब्दी को सागर मा सबै भन्दा ठूलो विपत्ति
खनिज ग्लास र Glassware
कसरी मानिसहरूलाई मा ringworm उपचार गर्न? उपयोगी आशय
Cardial प्रकार मा NTSD - यो के हो? विवरण निदान